မှော် ဧ ဒင် vs Opensea? ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကို “ သည်းခံ ပါ” – Pandaily
May 29, 2022, 11:57မနက် 2022/05/29 21:24:05 Pandaily
မြင်ယောင် ကြည့်ပါ-စံသတ်မှတ်ချက် များစွာ အရ အမေ ဇုံ သည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး စျေးဝယ် ပလက်ဖောင်း ဖြစ် ပြီး၎င်း ကြီးစိုး သော အနေအထား ကိုထိန်းသိမ်း လိုသည်။ တစ္ဖက္ မွာလည္း Shopee ဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွ မွာ ခ်ည္း ပဲ ဦးေဆာင္ ေနသူ ပါ။ ဒီတော့ တစ်နေ့ ကျရင် Shopee မှာ Amazon ထက် ၁၀ ဆ လောက် ရောင်း မယ်ဆိုရင် ဘာဖြစ် မလဲ။
အခြေခံအားဖြင့် ၊ ယခု NFT ကမ္ဘာ တွင် ဖြစ်ပျက် နေ သောအရာ ဖြစ်သည်။ OpenSea သည် ဗဟိုချုပ်ကိုင် မှုမရှိသော blockchain Ethereum တွင် တည်ဆောက်ထားသော NFT စျေးကွက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ ပထမ ဦး ဆုံး နှင့် ယနေ့အထိ အကြီးဆုံး NFT စျေးကွက် ဖြစ်သည်။ OpenSea ၏ ပြိုင်ဘက် များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော Magic Eden သည် Solana ဟုခေါ်သော အခြား blockchain တွင်တည်ဆောက် ထားပြီး “ Solana ၏ ထိပ်တန်း NFT စျေးကွက် ကိုအခြေခံသည်။” အရဒက္ ပရ ယ္သို့သော် ဧပြီလ နှောင်း ပိုင်းမှ စ၍ Good Bear ဟုခေါ်သော Solana NFT စီးရီး ၏ လူကြိုက်များ မှုနှင့်အတူ Magic Eden ၏ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏသည် အ ဆတိုး များပြား လာပြီး နောက်ဆုံးတွင် မေလ ၁၆ ရက်တွင် OpenSea ကိုကျော် တက်ပြီး Solana NFT ကုန်သွယ်ရေး ဈေးကွက်တွင် OpenSea ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို စမ်းသပ်ခဲ့သည်။
ပထမ ဦး စွာ ဝက်ဝံ ကော င်းက ဘာ လဲ။ ၎င်းသည် ဗဟိုချုပ်ကိုင် မှု လျှော့ချ ထားသော blockchain Solana တွင် ထုတ်ဝေသော NFT ၁၀, ၀၀၀ သို့မဟုတ် အစားထိုး မရသော တိုကင် များစုဆောင်း ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် အဆင်ပြေ စေရန် သူတို့ကို စီးပွားရေး အရ တန်ဖိုး ရှိသည့် ကာတွန်း ဝက်ဝံ များ ဟု သင် ထင် ကောင်း ထင် လိမ့်မည်။ ထို့အပြင် စီမံကိန်း အဖြစ်ေၾကျငာ ခ်က္Okay Bears သည် တန်ဖိုး များ အစု တစ်ခု ကိုလည်း ကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်း ၏အနှစ် သာ ရမှာ လူ တိုင်းကို လက်ရှိ အခြေအနေတွင် လုံခြုံမှု ကင်းမဲ့ စွာ နေထိုင် နိုင်ရန် သက်တောင့် သက်သာ ရှိပြီး ပွင့်လင်းသော အသိုင်းအဝိုင်း တစ်ခုဖန်တီး ရန် လူ များကို ဖိတ်ကြား ရန်ဖြစ်သည်။ သင်သည် cryptocurrency SOL ဖြင့် ဝက်ဝံ ကို ၀ ယ် နိုင်သည်။ ၎င်းသည် သင်၏ virtual property ဖြစ်လာသည်။ အကယ်၍ ၎င်း ၏တန်ဖိုး မြင့်တက် လာပါက အမြတ်အစွန်း အတွက် သင် ရောင်း လို ပေမည်။
Okay Bears ကို April ပြီလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် Solana blockchain တွင် ၁. ၅ Sol ဖြင့် ရောင်းချ ခဲ့ပြီး ထိုအချိန်က ဒေါ်လာ ၁၅၀ ခန့် တန်ဖိုးရှိသည်။ ၎င်းသည် လူကြိုက်များ ခဲ့ပြီး မေလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် “ Good Bear” ၏ပထမဆုံး NFT Market Magic Eden သည် OpenSea ကို ကျော်တက် ခဲ့သည်။ ထိုသို႔ ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေျခရာ ခံ ေနသည့္ DappRadar ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္ မ်ားအရ ေမ ၁၆ ရက္အထိ Magic Eden ၏ ၂၄ နာရီ အေရာင္းအ၀ယ္ မွာ ေဒၚလာ ၄၇ ဒသမ ၂၂ သန္း ရွိၿပီး OpenSea ၏ ၂၄ နာရီ အေရာင္းအ၀ယ္ မွာ ေဒၚလာ ၃၂ ဒသမ ၈၈ သန္း ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ထို့အပြင် ရောင်းချ ပြီးနောက် ၂၄ နာရီအတွင်း Okay Bears သည် OpenSea တွင် တစ်ပတ်ရစ် အရောင်းအ ၀ ယ် ပမာဏ သည်ဒေါ်လာ ၁၈. ၅ သန်း နှင့်ညီမျှသည်။ Okay Bears သည် Okay Bears သည် ၂၄ နာရီအတွင်း Solana ၏အကြီးဆုံး NFT စီးရီး ဖြစ်လာသည်။ အမြင့်ဆုံး တွင် ဝက်ဝံ ၏ စျေး နှုန်းသည် ၂ ၃၇ sol (ဒေါ်လာ ၁၁, ၄ ၉၀) အထိမြင့်တက် နိုင်ပြီး ဖြန့်ချိ သည့်နေ့ ထက် ၁၅, ၈၀၀ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့သည်။
ယခုအချိန်တွင် Magic Ed ဒင် ဥယျာဉ် သည် Solana NFT ကုန်သွယ်ရေး နယ်ပယ်တွင် အပြည့်အ ၀ လွှမ်းမိုး ထား ဆဲဖြစ်သည်။ 2022 မေလ 18, မှော် ဧ ဒင် ဥယျာဉ်97.2%OpenSea သည် ၂. ၅% နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် စျေးကွက် အရောင်းအ ၀ ယ် ဖြစ်သည်။ စုစုပေါင်း ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ၏ စည်းကမ်း ချက် များ၌, ဒေတာ အလားတူ ဖြစ်ပါသည်: Magic Eden OpenSea သာ 623 နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် 24,383 တစ် နေ့တာ ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ ရှိပါတယ်။
Solana NFT ကိုအဓိက NFT စျေးကွက် များတွင် နေ့စဉ် ဝယ်ယူ ပါ။ (Credit: Dune)
၎င်းသည် Taifang အခြေစိုက် NFT စျေးကွက် ဖြစ်သော OpenSea ကို ခြိမ်းခြောက် မှု ဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည် ၎င်း ၏တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက် တွင် “ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး NFT စျေးကွက်” ဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြု ခဲ့သည်။ မေး စရာ ရှိ တာက မှော်ဆရာ ဧ ဒင် ဥယျာဉ် ကို ဒီ အတိုင်း ထား မှာ လား။ တွစ်တာ တွင် သူတို့နှစ် ဦး အကြား ဆက်သွယ်မှု အနည်းငယ် က သဲလွန်စ အချို့ ပေးခဲ့သည်။ OpenSea သည် ယခု hosting သာ ဖြစ်သော်လည်း၂-၅%Solana NFT အရောင်းအ ၀ ယ် အားလုံး ၏တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက် တွင် “ Solana NFT” ကို “ အားလုံး NFT” မှလွဲ၍ သီးခြား အမျိုးအစား တစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြထားပြီး Twitter တွင် OpenSea သည် အပြည့်အဝ ဖန်တီး ခဲ့သည်ThreadSolana NFT စီမံကိန်း မှ ကျူးလွန် ။ တုန့်ပြန်မှု အနေဖြင့် Magic Eden က “ Solana Project အတွက် သဲလွန်စ ။ သင်သည်သင်၏ ကိုယ်ပိုင် သုတေသန ကို မပြုလုပ် သောအခါ ဤအရာ သည် ဖြစ်ပျက် လိမ့်မည်” ဟု မထင် မှတ် ဘဲ ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။ OpenSea သည် Solana NFTS တွင် အားသာချက် အနည်းငယ်သာရှိသည်။ Magic Ed ဒင် ၏ တုန့်ပြန် မှုသည် OpenSea ၏မူလ ပို့စ် ထက် ပို၍ “ Like” ရရှိခဲ့သည်။
မည်သို့ပင်ဆို စေကာ, OpenSea လူတိုင်း အတွက် စျေးကွက် ဖြစ်လာ လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ Web3 marketplace protocol အသစ်ကို မေလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် စတင်ခဲ့သည်။“ ပင်လယ် ဆိပ်ကမ်း” ၀ ယ် သူများကို cryptocurrencies မှလွဲ၍ အခြား ပိုင်ဆိုင် မှုများအတွက် NFT များကို ငွေပေးချေ ရန်ခွင့်ပြု ခြင်းအပါအ ၀ င် သုံးစွဲ သူများအား NFT များကို ၀ ယ် ရန်နှင့် ရောင်း ရန် ဆန်းသစ် သော နည်းလမ်းများဖြင့် ၀ ယ် ခြင်းအားဖြင့် ၎င်းသည် NFT စျေးကွက် တစ်ခုလုံး၏ ငွေ ဖြစ် လွယ် မှုကိုတိုးမြှင့် စေလိမ့်မည်။ သဘောတူညီချက် အသစ်သည် လုံးဝ ပွင့်လင်း ပြီး ဗဟို ချုပ် ကို င်မှု လျှော့ချ ခြင်း၏ အဆင့်မြင့် အဆင့် များကိုလည်း ထုတ်လုပ် လိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ စာချုပ် များ ကိုပိုမိုကောင်းမွန် အောင်ပြုလုပ် ခြင်းဖြင့် ဓာတ်ဆီ ကုန်ကျစရိတ် ကိုလျှော့ချ ခြင်းဖြစ်သည်။ Ethereum စျေးကွက် သို့ ၀ င်ရောက် လာသော NFT ၀ ယ် သူ များစွာ ကိုတားဆီး သော ပြ problem နာ ဖြစ်သည်။ Magic Eden သည် ပြ problem နာ အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဖြေရှင်းနည်း များ ကိုပေး နိုင်ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:တရုတ် NFT အပတ်စဉ်: Interactive Web3 စျေးကွက်